Imidlalo Engcono Kakhulu Yesiphambano ngo-2020 - Ukudlala
Imboni yokudlala ikhula nsuku zonke futhi nakanjani izoguqula ulwazi lokudlala emashumini eminyaka ezayo. Imidlalo efana nePUBG, FORTNITE, CALL OF DUTY, njll. Idonse ukunaka kwentsha yanamuhla. AmaGamers abe nemisebenzi ephumelelayo embonini yokudlala, ngenxa yale midlalo ethandwayo.
Njengomunye wemikhakha evelayo neqhekezayo namuhla, isici esincomekayo semidlalo yanamuhla yisici sokudlala esiphambanweni. Imidlalo ye-cross-platform kulula ukuyifinyelela ku-inthanethi ngezinhlelo ezahlukahlukene zokudlala njenge-Xbox, PC, PS4, njll. Le midlalo ayiqondene ngqo nepulatifomu.
Ingasebenza kunoma iyiphi ipulatifomu ngaphandle kwemingcele noma imikhawulo. Imidlalo efanayo iyadlalwa kuzingxenyekazi ezahlukene.
Uhlu lwamageyimu we-Cross-Platform adumile:
Imidlalo enqamulelayo inika amandla ama-gamers ukuthi adlale imidlalo kuzingxenyekazi ezahlukahlukene kalula. Ngaphandle kosayizi wesikrini wamadivayisi amaningi, awukho umehluko omkhulu kulwazi lokudlala.
Isibonelo, uma othile edlala i-Call of Duty ku-PS4 yakhe, angadlala umdlalo ofanayo nomunye onepulatifomu ehlukile.Imidlalo ye-cross-platform ithole ukuthandwa okukhulu eminyakeni embalwa edlule njengoba lesi sici sivumela ukwenza izinto ezihlukahlukene kakhulu futhi sinikeza izinketho eziningi zegeyimu.Eminye imidlalo yesikhulumi esithandwayo ifaka phakathi:
Amagiya empi 4
Izimpi zeHalo 2
Ngabe amapulatifomu e-Cross ayatholakala ku-Modern Gaming?
Sonke siyakuthanda ukudlala noma nini lapho sijabulela okuqukethwe okuningi. Kuhlala kumnandi ukudlala imidlalo nabangani nomndeni. Kungaba nzima ukudlala ndawonye lapho umngani wakho omkhulu enomshini ohlukile. Ikunikeza amathani ezinkinga emidlalweni yabadlali abaningi futhi. Namuhla sizozama ukuphendula ukuthi ngabe imidlalo ye-Cross-Platform iyatholakala kumadivayisi anamuhla. Kulo mhlahlandlela, sinamathani wezinketho ezitholakalayo emakethe yanamuhla yemidlalo. Kunokunemba okungenakuphikiswa ezihlokweni zakamuva. Ake sibheke eminye imidlalo edumile yesikhulumi ngo-2020.
Ingenye yezingxenyekazi ezithandwayo kakhulu zemidlalo. I-Xbox ingasetshenziselwa ukugembula yinoma ngubani, noma kuphi, futhi nganoma yisiphi isikhathi, ngenxa yokuhambisana kwayo kokudlala. I-Xbox manje isempumalanga yokuxhuma ne-PS4, i-PC, iNintendo Shintsha, njll. Imidlalo embalwa engadlalwa kungxenyekazi ye-Xbox futhi ixhunywe ne-PC ifaka phakathi:
Ukuvuka okufile 4
I-PC imele ikhompyutha yomuntu siqu. I-PC ngokusobala iyipulatifomu enkulu kakhulu yokudlala imidlalo yevidiyo edinga inani eliphezulu lamandla wehhashi eluhlaza. Ama-PC wamageyimu amadivayisi athandwayo asenza sikwazi ukufeza ukusebenza okulungele i-gameplay. Ama-PC athandwa kakhulu ngoba anezinketho eziningi zokudlala kunezingqungqulu zemidlalo.
Eminye imidlalo ye-PC ethandwayo yilena: -
Kuyikhonsoli yokudlala yasekhaya yesizukulwane sesine yochungechunge lwe-Play Station. Le khonsoli ifana ne-PC yokudlala kepha ibiza kakhulu. Eminye imidlalo ethandwayo yesikhulumi sePS4 ifaka:
Impi yokufa 11 ekugcineni
Asikho isibhakabhaka sendoda
I-PS5 iyikhonsoli yevidiyo yasekhaya onesikweletu sokuthuthuka esiya kwaSony Interactive Environment. I-PS5 ne-Xbox series X yimicimbi ebaluleke kakhulu yokudlala yango-2020. Imidlalo emikhulu yesikhulumi ku-PS5 ne-Xbox series X ifaka:
Fortnite:Ungumdlalo omkhulu kunawo wonke wesikhulumi se-PS5 ne-Xbox series X.
I-Chivalry 2:Lo mdlalo we-cross-platform usebenza kahle kuwo wonke amapulatifomu amakhulu njenge-PS5, PS4, Xbox, njll.
Ama-Avengers kaMarvel:Ungomunye wemidlalo ethandwa kakhulu yesikhulumi esikhona. Umdlalo uvumela abadlali bePS4 nePS5 ukuthi badlale ndawonye futhi i-Xbox eyodwa ne-Xbox series X abadlali badlale ndawonye.
Ukuduma kwezikelemu:Kuyinto umdlalo othandwayo osekelwa yi-PS5, PS4, ne-PC.
Ukuqhathanisa Okuthrendayo Kakhulu: I-PS5 vs Xbox Series X - Iyiphi i-Gaming Console Engcono Kakhulu?
Imidlalo Engcono Kakhulu Yesiphambano Eyenziwa Yilelo nalelo Gamer:
Ukugembula akumnandi ngaphandle kwabangane. Unyaka wezi-2020 umayelana nokuxhumeka, futhi siyakujabulela kusuka ekhaya. Ukugembula kunikeza indlela elula yokuxhuma emhlabeni wanamuhla. Kulesi sigaba, sizobheka izinketho zabadlali abaningi ezithandwa kakhulu. Lokhu kuzokusiza ukuthi udlale okuqukethwe ngaphandle kwezinkinga kalula. Abasebenzisi bangaqala ukusakaza kumadivayisi abo. Kuzosiza uma unoxhumano olusheshayo lwe-inthanethi ngesipiliyoni esihle kakhulu. Nayi imidlalo embalwa yesikhulumi okufanele uyihlole.
1. Amashumi amane
I-Fortnite ingenye yemidlalo yevidiyo edlalwa kakhulu etholakalayo namuhla.Inikeza isipiliyoni semidlalo yabadlali abaningi esingenamthungo futhi esibushelelezi online. Imidlalo yama-Epic ingabadali balo mdlalo omnandi. Ezinye izindlela ezintathu zokudlala ezitholakala kuyo zifaka iParty Royale, iSave The World, neCreative. Okwamanje iyatholakala kubanikazi be-Xbox One, i-PS4, i-PC, ama-android, neNintendo Shintsha.
2. Ukubizelwa Umsebenzi: Impi Yesimanje
Le yimidlalo emibili edume kakhulu yeCall of Duty: i-'COD Modern Warfare 'ne' Warzone, 'okuyisigaba sasebukhosini sangaphambili. Le midlalo emibili yevidiyo nayo iyathandwa ngoba inikela ngokuqhubekela phambili kwepulatifomu phakathi kwezihloko ezishiwo ngenhla. Banokusekelwa komdlalo okusebenzayo ku-Xbox One, i-PS4, nama-PC.
I-COD Mouse Engcono Kakhulu Yezimpi Zanamuhla
ISMITE idume ngohlu lwayo lomlingiswa. Inikeza izindlela zokudlala eziningana. Kungadlalwa ngokudlalwa ku-Xbox One, PS4, PC, nakuNintendo Shintsha.
I-Minecraft ngumdlalo we-sandbox owaziwa kakhulu onikeza umuzwa oyingqayizivele. Kukuthuthuka okusha kweMojang Studios futhi kuyadlalwa ku-Xbox One, PS4, PC (windows kuphela), i-android, neNintendo switch. IMicrosoft njengamanje ingumnikazi wale studio esimnandi sokudlala.
I-Rocket League ingenye yemidlalo enokuncintisana kakhulu. U-Psyonix ungumsunguli womdlalo obabazekayo nokho oqondile.Iyathandwa ngenxa yegeyimu yayo eyingqayizivele. Ngenxa yokuthandwa kwayo okukhulu, isibuyekezo esisha sizoba nesici sokuqhubekela phambili kwepulatifomu phakathi kwe-Xbox One, iNintendo Shintsha, iPc, nePS4.
Le yimidlalo embalwa yesikhulumi ongayijabulela nsuku zonke ngokusebenzisa ulwazi lwakho lokudlala. I-Rocket league izoshintsha i-gameplay yakho yebhola futhi ikusize uthole isipiliyoni esihle sokuxhuma.
Ukulinganiselwa Kwemidlalo Ye-Cross-Platform:
Yonke imali inezinhlangothi ezimbili. Ngenkathi imidlalo yasesiteji ekhuthaze isiko lokudlala, inemikhawulo yayo, efana:
1. Isici sezindleko
Kubiza kakhulu impela ukufaka umdlalo wakho kumasistimu ahlukile futhi kuqinisekiswe ukuthi kuhamba kahle.
2.Ukufaka ikhodi nokuthuthuka
Izinhlelo zesoftware zemidlalo yesikhulumi esinqamulelayo akulula. Kumele zihlelwe futhi zifakwe amakhodi ngendlela yokuthi zihambe kahle kuma-platforms amaningi. Ngenxa yalesi sici, izinkampani eziningi azihambeli ekuthuthukiseni imidlalo yesikhulumi.
Imidlalo ye-Cross-Platform iyimfuneko kuwo wonke umuntu ngo-2020. Sisondela nsuku zonke maqondana nokwephula imingcele emisha. Sizojabulela umdlalo omnandi wegeyimu ngokusebenzisa le midlalo. Umqondisi wethu uzama ukukunikeza ngezinketho eziningi ezitholakalayo emakethe. Zizame namuhla futhi ube nesikhathi esihle nabangane bakho bokudlala ku-inthanethi.
15 Best Games like Roblox (2020)
Ungazilungisa kanjani izingqinamba zeHulu ezingasebenzi?
Imidlalo Eyesabekayo YamaRoblox 2020 - Kumele Udlale
Ezinye izindlela ezihamba phambili zeTeamViewer Okufanele Uzame (2020)
I-Motherboard ehamba phambili yeRyzen 5 3600 - Umhlahlandlela Wokuthenga (2020)
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi seNetflix?
yini eku-hulu engekho ku-netflix
guqula ividiyo ye-youtube ibe yi-mp3 audio
insiza yokusakazwa kwama-movie ehamba phambili online
bukela izinkathi ezigcwele ku-inthanethi mahhala
sakaza ama-movie mahhala akukho akhawunti
mp3 isiguquli se-youtube samahhala sokulanda inguqulo ephelele